ကိုဗစ် ၁၉ အကူးစက်ခံရသူဟာ ကမ္ဘာမှာ ၃၆ သန်းကျော်နေပြီမို့ ကာကွယ်ဆေးကို လူတိုင်း မျှော်လင့်နေကြပေမယ့် ခုထိ မထုတ်နိုင်သေးပါဘူး။ ဒီလိုကြာနေရတာဟာ စိတ်ချရတဲ့ ကာကွယ်ဆေးရဖို့ အဆင့်ဆင့် လုပ်ဆောင်နေရတာကြောင့်လို့ အဏုဇီဝဗေဒ ပညာရှင် မခင်ဇာဝင်းပြည့်က ပြောပါတယ်။
ကိုဗစ် ၁၉ အကူးစက်ခံရသူဟာကမ္ဘာမှာ ၃၆ သန်းကျော်နေပြီမို့ ကာကွယ်ဆေးကို လူတိုင်း မျှော်လင့်နေကြပေမယ့် ခုထိ မထုတ်နိုင်သေးပါဘူး။ ဒီလိုကြာနေရတာဟာ စိတ်ချရတဲ့ ကာကွယ်ဆေးရဖို့ အဆင့်ဆင့် လုပ်ဆောင်နေရတာကြောင့်လို့ အဏုဇီဝဗေဒ ပညာရှင် မခင်ဇာဝင်းပြည့်က ပြောပါတယ်။
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။. ။“ကာကွယ်ဆေးထုတ်တာက အဆင့်ဆင့်နဲ့ သွားရတယ်။ အခုအချိန် ကိုဗစ်အတွက် ကာကွယ်ဆေးထုတ်တာက အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ သူတို့ လုပ်နေကြတာပါ။ စတာက ဘယ်ကစသလဲ ဆိုရင် laboratory discovery stage ဆိုတာရှိတယ်။ ရောဂါတခု ရှိပြီဆိုရင် အဲဒီရောဂါကို ကုသမယ့်ဆေး၊ ကာကွယ်မယ့်ဆေး ဆိုတာကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုး ကာကွယ်မှာလဲ၊ ဘယ်လို ပစ်မှတ်ထား target လုပ်မှာလဲ ဆိုတာ ရှိတယ်။ အဲဒီဟာကို lab ထဲမှာ စမ်းတဲ့အခါ ကျရင် အဏုဇီဝဗေဒ ပညာရှင်တွေပါမယ်၊ ဒါက ကာကွယ်ဆေး ဆိုတဲ့အခါ ကျတော့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ခုခံအား ကိုလည်း တိုင်းတာရတဲ့ အတွက်ကြောင့် ခုခံအားဆိုင်ရာ ပညာရှင် Immunologist တွေပါမယ်၊ နောက် microbiologist ဆိုတာပါမယယ်။ ဆဲလ် တခုအတွင်းမှာ ဆေးတခုက ဝင်သွားပြီဆိုရင် ဆဲလ်တွေ အပေါ်မှာ ဘယ်လိုမျိုး သက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာ Cellbiologist တွေ Molecular biologist ဆိုတဲ့ သိပ္ပွံပညာရှင် အမျိုးမျိုးက ဓါတ်ခွဲခန်းတွေမှာ ပူးပေါင်း ပါဝင်ပြီးတော့ ဒါကို သူတို့ ဖေါ်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်။ ”
ဒီ laboratory discovery stage မှာ စံနစ် ၂ မျိုးနဲ့ စမ်းသပ်ပါတယ်။
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။. ။“အဲဒီမှာ သတ္တဝါမဲ့ စံနစ် ဆိုတာရှိတယ်။ အဲဒီသတ္တဝါမဲ့ စံနစ်ဆိုတာက ဓါတ်ခွဲခန်းထဲမှာ ဆဲလ် တွေကိုမွေးမယ်၊ မွေးပြီးရင် အဲဒီ ဆဲလ်တွေ ပေါ်မှာ ဆေးတွေ ပေးချတာ ပေါ့နော်။ ဘယ်လိုမျိုး ဒီဆဲလ်တွေပေါ်မှာ အကျိုး သက်ရောက်မှု ရှိတယ်၊ နောက် dose က ဆေးပမာဏက ဘယ်လောက်ရှိသလဲ၊ ဆေးအချင်းချင်း နှိုင်းယှဉ်တဲ့ဟာမျိုးတွေ၊ နောက် အချိန် တရက်တန်သည် ၂ ရက်တန်သည် အတွင်းမှာ ဘယ်လောက် ပြောင်းလဲမှုရှိလဲဆိုတာ၊ ဒါတွေကို သူတို့က ဆဲလ်ထဲမှာ သတ္တဝါမဲ့ စံနစ်နဲ့စမ်းသပ်တယ်။ ပြီးသွားရင် သတ္တဝါနဲ့ စမ်းတယ်။ များသောအားဖြင့် ကြွက်ကို အသုံးပြုတယ်။ အခု ကိုဗစ်အတွက် ဆို မျောက်တွေကို သုံးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ဒီမှာ discovery တွေ့ရှိမှုက သေချာပြီ ဆိုလို့ရှိရင် အဲဒီဆေးကို ဘယ်ယူသွားရလဲ ဆိုတော့၊ clinical trial ဆိုတာ လူတွေကို အသုံးပြုပြီးတော့ စမ်းတဲ့ဟာပေါ့။”
မေး။. ။“ဆိုတော့ အဆင့်ဆင့် လုပ်နေရတာ အတွက် ကြတာ ပေါ့နော်။”
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။. ။“ဟုတ်ပါတယ်။ လူတွေနဲ့ စမ်းတဲ့ အဆင့်ရောက်သွားပြီ ဆိုရင်လည်း အဆင့်က clinical trial 1- 2-3သုံးခုရှိတယ်။ အဆင့်ဆင့်မှာ. ဘယ်လောက် အဆိပ်ရှိသလဲ၊ ဘယ်လောက် စိတ်ချရသလဲ ဆိုတာတွေကို မျိုးစုံစမ်းပြီးတော့မှ FDA က အတည်ပြုဖို့ လုပ်ပါတယ်။”
မေး။. ။“ဆေးထုတ်တဲ့နေရာမှာ ဒီကာကွယ်ဆေး ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ ဆိုတာ ပြောပြပေးပါ။”
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။. ။“အများပြည်သူ နားလည်အောင် ပြောရရင်တော့ ရောဂါ ဖြစ်စေတဲ့ ဓါတ်ပေါ့နော်။ ဘက်တီးရီးယား ဖြစ်မယ်၊ ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်မယ်။ ဘယ်လိုဟာမျိုးပဲ ဖြစ်ပစေ ဒီရောဂါဖြစ်စေတဲ့ဓါတ် ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ရောက်သွားပြီ ဆိုရင် ဒါက pathogen လို့ ခေါ်တယ်။ အပြင်ကကောင်တွေ foreign ကောင်တွေကို pathogen ပေါ့နော်။အဲဒီ pathogen က အပေါ်မှာ antigen ဆိုတာရှိတယ်။ သွေးထဲမှာတော့ စီးဆင်းနေတဲ့ antibody လို့ခေါ်တဲ့ဟာ ရှိတယ်။ သူက ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အမြဲတမ်း သွားနေတဲ့ဟာ ပေါ့နော်။ အဲဒီ antibody က ပက်သိုဂျင်ပေါ်မှာ ပြနေတဲ့ antigen ကိုသွားပြီးတော့ ကပ်တယ်။ အဲဒီလို ကပ်သွားပြီးရင် သူက ကျန်တဲ့ immune system ကိုယ်ခံအားစံနစ်ကို သူက သွားပြီးတော့ alert လုပ်တယ်။ သတိပေးတယ်။ အဲဒါက အပြင်ကောင် ဝင်နေပြီ ငါတို့ တိုက်ရတော့မယ် ဆိုပြီးတော့။ alert လုပ်တယ်။ ဆိုတာက သတိပေးတာ ပေါ့နော်။ အဲဒီလို သတိပေးတဲ့ အခါ ကျတော့ ကျန်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရှိတဲ့ immune system ကိုယ်ခံအားစံနစ်က အဲဒီအခါကျတော့မှ activate ဖြစ်တယ်။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုတော့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပထမဆုံးသွားနေတဲ့ antibody တွေကနေ ပြီးတော့၊ ငါတို့.အပြင်မှာအကောင် ရောက်နေပြီ။ အကောင် အပြင်မှာ ဝင်နေပြီ ဆိုပြီးတော့ သူက ပြောလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အနောက်ကနေပြီးတော့ စစ်ကူပို့တယ်။
ဆိုတော့ ကာကွယ်ဆေး ထုတ်တဲ့ နေရာမှာ ကြည့်ရင်. - သူက ဒီ antibody တုန့်ပြန်မှု respond ထွက်လာဖို့ သူက အရင် induce လုပ်ပေးတယ်။ အရင် သင်္ခန်းစာပေးတဲ့ သဘောမျိုး ပေါ့နော်။ ရောဂါ မဖြစ်စေတဲ့ ပက်သိုဂျင် တခုကို ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ထည့်တယ်။ ထည့်တဲ့ အခါကျရင် antibodyပထမဆုံး သွားနေတဲ့ကောင်တွေ၊ ကင်းလှည့်နေတဲ့အကောင်တွေကနေ တွေ့လိုက်တယ်။ တွေ့လိုက် ပြီးရင် သူက ကျန်တဲ့ စစ်သည်တွေကို ဒီအကောင်တွေကို တိုက်ဖို့ သတင်းပို့ပေးတာပေါ့။ ဒီစစ်သည်မှာက မှတ်တမ်းလေးတွေ ရှိတယ်။ ဒီအကောင် ဝင်ဘူးသွားပြီ ဆိုရင် နောက်တကြိမ် ဝင်တဲ့ အခါ ခလယ်က ကြား period စောင့်စရာ မလိုတော့ဘူး ပေါ့နော်။
အခု တော်တော်များများ ဖြစ်နေတဲ့ ဟာက ခလယ်၊ ဒီနောက်စစ်သည် ထွက်မလာခင် ကြား period မှာ လူတွေက မခံနိုင်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ တကယ်လည်း စစ်ကူလည်း ရောက်လာရော လူက တကယ် တိကျတဲ့ pathogen လိုပဲ သူက တိုက်ရိုက် တားဂက်လုပ် ပေးတာမျိုး မဟုတ်တော့ ပဲနဲ့ တကိုယ်လုံး ပြာသွားတာမျိုး ဖြစ်တာပေါ့နော်။ အခု ကာကွယ်ဆေး ထုတ်တယ် ဆိုတာ သူတို့က ကိုဗစ် ကိုပဲတဲ့တဲ့ သွားပြီး တားဂက် လုပ်မယ်။ ပြီးတော့ ခြေဖျက် ပေးမယ်။ အဲဒီဟာကို သူတို့က လုပ်တာပါ။”
မေး။ ဒီလိုပုံစံနဲ့ ဆေးထုတ်ဖို့ လုပ်မယ် ဆိုရင် အဆင့် ဘယ်နှစ်ဆင့် ရှိပါလဲ။
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။။ “စုစုပေါင်းဆိုရင်တော့ အဆင့်က ၅ ဆင့် ပေါ့။ ပထမဆုံး ဆိုရင် သူက pre clinical ဆိုတဲ့ဟာ ရှိတယ်။ ဒါကတော့ ဓါတ်ခွဲခန်းထဲမှာ lab ထဲမှာ လုပ်တဲ့ဟာ။ ဒီဗိုင်းရပ် ဒါမှမဟုတ် ဒီ ဘက်တီးရီးယား ကို ခြေဖျက်မယ် ဆိုရင် ဒီဟာကို ဘယ်လိုမျိုး ခြေဖျက်မလဲ။ ဘယ်လို mechanism လဲ ဆိုတာရှိတယ်။ field တခုရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ။ အခု ဒီထွက်လာတဲ့ ကာကွယ်ဆေး vaccine ဆိုရင်လည်း ဒီကောင်ကို target လုပ်မယ် ပစ်မှတ်ထားကြည့်မယ်ဆိုရင် တွေ့သွားတဲ့. Antigen ကို သူတို့က ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲ ကိုဘယ်လို introduce လုပ်မလဲ။ DNA အနေနဲ့ introduce လုပ်တာရှိတယ်။ RNA အနေနဲ့ introduce လုပ်တာရှိတယ်။ အခု ဒီ ထုတ်မယ့် Moderna တို့ Pfizer တို့ဆိုရင် M- RNA ကို သုံးပြုပြီးတော့ ထုတ်မယ့် ကာကွယ်ဆေးပေါ့နော်။. ဒါ ကို ဘယ်လိုမျိုး နည်းပညာနဲ့ ထုတ်မှာလဲ ဆိုတာ အလုပ်လုပ်တဲ့ ပုံစံကို သူတို့ ရှာရတယ်။
ဒီအလုပ်လုပ်ပုံ လုပ်နည်း ပုံစံက ဖြစ်နိုင်တယ်။ သေ ချာတယ်။ အန္တရာယ်လည်း ကင်းတယ်ဆိုလိုရှိရင် နောက် အဆင့်တခု အဲဒါကျရင် သူက phase 1 . အဲဒီ phase 1 မှာ ကျရင် လူမှာ ဆိုလိုရှင်ကော တကယ်တမ်း တွေ့တဲ့ အခါ ကျရင် အဆင်ပြေမလား ဆိုတဲ့ဟာကို သူတို့က စမ်းရတယ်။ ဒါက လူ့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့လည်း dose ဘယ်လောက် ပေးမလဲလိုမျိုး အဲဒါတွေ ကျရင် သူက phase 1 – phase2မှာ ဆုံးဖြတ်ရတယ်။ အဲဒါ ဆုံးဖြတ်ပြီးရင် phase3ကို ရောက်သွားတယ်။အခုဒီ တော်တော်များများ လုပ်နေတဲ့ ဟာတွေ ဆိုလို့ရှိရင် phase2နဲ့3ကို ပေါင်းပြီး လုပ်တာပဲ ဖြစ်စေ။ phase 1 နဲ့ phase2ကို ပေါင်းပြီး လုပ်တာပဲ ဖြစ်စေ။ အချိန်မြန်အောင် သူတို့ ပေါင်းပြီး လုပ်နေတာတွေ ရှိတယ်။
phase 1 မှာ ၁၅ ယောက်ကနေ အယောက် ၃၀ ဆိုရင် phase2မှာ သူက ရာဂဏန်း။ phase3မှာ တော့ ထောင်ဂဏန်း အနဲဆုံး လုပ်ကြတယ်။
phase3မှာကျရင် ဒီကာကွယ်ဆေးက ဘယ်လောက်အထိ အကျိုး သက်ရောက်မှု ရှိသလဲ။ ဥပမာ - အကျိုးသက်ရောက်မှုက ၂ လပဲ ရှိမလား။ ဒါဆို ၂ လပြီးရင် နောက်တကြိမ် ထပ်ထိုးရမလား။ ဒီ ၂ လ နောက်တကြိမ် ထပ်ထိုးပြီး သွားရင်ကော နောက်ဘယ် ဘယ်လောက် ကြာကြာ အထိ ဒီအကျိုး သက်ရောက်မှု ရှိသလဲ။ နောက် ရောဂါ အခံ ရှိတဲ့ လူတွေဆိုရင်ကော၊ ဒီတခြား ဆေးတွေနဲ့ cross reaction ရှိသလား ။ ဒါတွေကို phase3မှာ သေသေချာချာ စမ်းသပ်ရတယ် ပေါ့နော်။
မေး။. ။“ phase3စမ်းသပ်ပြီးရင်တော့ တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေတဲ့ အဆင့် ရောက်နေပြီပေါ့။
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။. ။“ဟုတ်ကဲ့။ Phase3ကို စမ်းသပ်ပြီး တော့ အောင်မြင်တယ် ဆိုရင် ဒီဆေးသည် အကျိုးသက်ရောက်မှုလည်း ရှိတယ်။ အန္တရာယ်လည်း ကင်းတယ်ဆိုတာကို ပြောပါတယ်။ phase4ဆိုတဲ့ဟာက ကြေညာထားခြင်း မဟုတ်ပဲနဲ့ လုပ်တဲ့ study လေ့လာမှုပေါ့။ FDA က phase3ပြီးရင် Approval ပေးလိုက်ပြီ။ phase4မှာကျတော့ တကမ္ဘာလုံးကို ဖြန့်လိုက်ပြီးသား ဖြစ်တဲ့ အတွက် သူ့ရဲ့ long term effect ရေရှည် အကျိုး သက်ရောက်မှုပေါ့။ ဒီဆေးကို ထိုးလိုက်ပြီးလို့ တနှစ်ကြာရင် ဘာဖြစ်မလဲ။ ၂ နှစ်ကြာရင် ဘာဖြစ်မလဲ။ သူ့ဟာသူ ဆက်ပြီးတော့ ရေရှည် လုပ်သွားတဲ့ ဟာကို ပြောတာပါရှင့်။”
မခင်ဇာဝင်းပြည့်ရဲ့ ပြောကြားချက်နဲ့ပ ဒီသီတင်ပတ်အတွက် သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာ. ကဏ္ဍကို ဒီမှာပဲ ရပ်နားလိုက်ပါရစေ။
ကိုဗဈ ၁၉ အကူးစကျခံရသူဟာ ကမ်ဘာမှာ ၃၆ သနျးကြျောနပွေီမို့ ကာကှယျဆေးကို လူတိုငျး မေြျှာလငျ့နကွေပမေယျ့ ခုထိ မထုတျနိုငျသေးပါဘူး။ ဒီလိုကွာနရေတာဟာ စိတျခရြတဲ့ ကာကှယျဆေးရဖို့ အဆငျ့ဆငျ့ လုပျဆောငျနရေတာကွောငျ့လို့ အဏုဇီဝဗဒေ ပညာရှငျ မခငျဇာဝငျးပွညျ့က ပွောပါတယျ။
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။. ။“ကာကှယျဆေးထုတျတာက အဆငျ့ဆငျ့နဲ့ သှားရတယျ။ အခုအခြိနျ ကိုဗဈအတှကျ ကာကှယျဆေးထုတျတာက အမွနျဆုံးနညျးနဲ့ သူတို့ လုပျနကွေတာပါ။ စတာက ဘယျကစသလဲ ဆိုရငျ laboratory discovery stage ဆိုတာရှိတယျ။ ရောဂါတခု ရှိပွီဆိုရငျ အဲဒီရောဂါကို ကုသမယျ့ဆေး၊ ကာကှယျမယျ့ဆေး ဆိုတာကို ဘယျလိုပုံစံမြိုး ကာကှယျမှာလဲ၊ ဘယျလို ပဈမှတျထား target လုပျမှာလဲ ဆိုတာ ရှိတယျ။ အဲဒီဟာကို lab ထဲမှာ စမျးတဲ့အခါ ကရြငျ အဏုဇီဝဗဒေ ပညာရှငျတှပေါမယျ၊ ဒါက ကာကှယျဆေး ဆိုတဲ့အခါ ကတြော့ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ ခုခံအား ကိုလညျး တိုငျးတာရတဲ့ အတှကျကွောငျ့ ခုခံအားဆိုငျရာ ပညာရှငျ Immunologist တှပေါမယျ၊ နောကျ microbiologist ဆိုတာပါမယယျ။ ဆဲလျ တခုအတှငျးမှာ ဆေးတခုက ဝငျသှားပွီဆိုရငျ ဆဲလျတှေ အပျေါမှာ ဘယျလိုမြိုး သကျရောကျမှုရှိတယျဆိုတာ Cellbiologist တှေ Molecular biologist ဆိုတဲ့ သိပ်ပှံပညာရှငျ အမြိုးမြိုးက ဓါတျခှဲခနျးတှမှော ပူးပေါငျး ပါဝငျပွီးတော့ ဒါကို သူတို့ ဖျေါထုတျတယျပေါ့နျော။ ”
ဒီ laboratory discovery stage မှာ စံနဈ ၂ မြိုးနဲ့ စမျးသပျပါတယျ။
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။. ။“အဲဒီမှာ သတ်တဝါမဲ့ စံနဈ ဆိုတာရှိတယျ။ အဲဒီသတ်တဝါမဲ့ စံနဈဆိုတာက ဓါတျခှဲခနျးထဲမှာ ဆဲလျ တှကေိုမှေးမယျ၊ မှေးပွီးရငျ အဲဒီ ဆဲလျတှေ ပျေါမှာ ဆေးတှေ ပေးခတြာ ပေါ့နျော။ ဘယျလိုမြိုး ဒီဆဲလျတှပေျေါမှာ အကြိုး သကျရောကျမှု ရှိတယျ၊ နောကျ dose က ဆေးပမာဏက ဘယျလောကျရှိသလဲ၊ ဆေးအခငျြးခငျြး နှိုငျးယှဉျတဲ့ဟာမြိုးတှေ၊ နောကျ အခြိနျ တရကျတနျသညျ ၂ ရကျတနျသညျ အတှငျးမှာ ဘယျလောကျ ပွောငျးလဲမှုရှိလဲဆိုတာ၊ ဒါတှကေို သူတို့က ဆဲလျထဲမှာ သတ်တဝါမဲ့ စံနဈနဲ့စမျးသပျတယျ။ ပွီးသှားရငျ သတ်တဝါနဲ့ စမျးတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ ကွှကျကို အသုံးပွုတယျ။ အခု ကိုဗဈအတှကျ ဆို မြောကျတှကေို သုံးခဲ့တယျဆိုတာကိုလညျး တှခေဲ့ရတယျ။ ဒီမှာ discovery တှရှေိ့မှုက သခြောပွီ ဆိုလို့ရှိရငျ အဲဒီဆေးကို ဘယျယူသှားရလဲ ဆိုတော့၊ clinical trial ဆိုတာ လူတှကေို အသုံးပွုပွီးတော့ စမျးတဲ့ဟာပေါ့။”
မေး။. ။“ဆိုတော့ အဆငျ့ဆငျ့ လုပျနရေတာ အတှကျ ကွတာ ပေါ့နျော။”
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။. ။“ဟုတျပါတယျ။ လူတှနေဲ့ စမျးတဲ့ အဆငျ့ရောကျသှားပွီ ဆိုရငျလညျး အဆငျ့က clinical trial 1- 2-3သုံးခုရှိတယျ။ အဆငျ့ဆငျ့မှာ. ဘယျလောကျ အဆိပျရှိသလဲ၊ ဘယျလောကျ စိတျခရြသလဲ ဆိုတာတှကေို မြိုးစုံစမျးပွီးတော့မှ FDA က အတညျပွုဖို့ လုပျပါတယျ။”
မေး။. ။“ဆေးထုတျတဲ့နရောမှာ ဒီကာကှယျဆေး ဘယျလို အလုပျလုပျသလဲ ဆိုတာ ပွောပွပေးပါ။”
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။. ။“အမြားပွညျသူ နားလညျအောငျ ပွောရရငျတော့ ရောဂါ ဖွဈစတေဲ့ ဓါတျပေါ့နျော။ ဘကျတီးရီးယား ဖွဈမယျ၊ ဗိုငျးရပျဈဖွဈမယျ။ ဘယျလိုဟာမြိုးပဲ ဖွဈပစေ ဒီရောဂါဖွဈစတေဲ့ဓါတျ ခန်ဓာကိုယျထဲ ရောကျသှားပွီ ဆိုရငျ ဒါက pathogen လို့ ချေါတယျ။ အပွငျကကောငျတှေ foreign ကောငျတှကေို pathogen ပေါ့နျော။ အဲဒီ pathogen က အပျေါမှာ antigen ဆိုတာရှိတယျ။ သှေးထဲမှာ စီးဆငျးနတေဲ့ antibody လို့ချေါတဲ့ဟာ ရှိတယျ။ သူက ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ အမွဲတမျး သှားနတေဲ့ဟာ ပေါ့နျော။ အဲဒီ antibody က ပကျသိုဂငျြပျေါမှာ ပွနတေဲ့ antigen ကိုသှားပွီးတော့ ကပျတယျ။ အဲဒီလို ကပျသှားပွီးရငျ သူက ကနျြတဲ့ immune system ကိုယျခံအားစံနဈကို သူက သှားပွီးတော့ alert လုပျတယျ။ သတိပေးတယျ။ အဲဒါက အပွငျကောငျ ဝငျနပွေီ ငါတို့ တိုကျရတော့မယျ ဆိုပွီးတော့။ alert လုပျတယျ။ ဆိုတာက သတိပေးတာ ပေါ့နျော။ အဲဒီလို သတိပေးတဲ့ အခါ ကတြော့ ကနျြတဲ့ ခန်ဓာကိုယျမှာ ရှိတဲ့ immune system ကိုယျခံအားစံနဈက အဲဒီအခါကတြော့မှ activate ဖွဈတယျ။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုတော့ ခန်ဓာကိုယျမှာ ပထမဆုံးသှားနတေဲ့ antibody တှကေနေ ပွီးတော့၊ ငါတို့.အပွငျမှာ ရောကျနပွေီ။ အကောငျ အပွငျမှာ ဝငျနပွေီ ဆိုပွီးတော့ သူက ပွောလိုကျတဲ့ အခြိနျမှာ အနောကျကနပွေီးတော့ စဈကူပို့တယျ။
ဆိုတော့ ကာကှယျဆေး ထုတျတဲ့ နရောမှာ သူက ဒီ antibody တုနျ့ပွနျမှု respond ထှကျလာဖို့ သူက အရငျ induce လုပျပေးတယျ။ အရငျ သင်ျခနျးစာပေးတဲ့ သဘောမြိုး ပေါ့နျော။ ရောဂါ မဖွဈစတေဲ့ ပကျသိုဂငျြ တခုကို ခန်ဓာကိုယျထဲကို ထညျ့တယျ။ ထညျ့တဲ့ အခါကရြငျ antibody ပထမဆုံး သှားနတေဲ့ကောငျတှေ၊ ကငျးလှညျ့နတေဲ့အကောငျတှကေနေ တှလေို့ကျတယျ။ တှလေို့ကျ ပွီးရငျ သူက ကနျြတဲ့ စဈသညျတှကေို ဒီအကောငျတှကေို တိုကျဖို့ သတငျးပို့ပေးတာပေါ့။ ဒီစဈသညျမှာက မှတျတမျးလေးတှေ ရှိတယျ။ ဒီအကောငျ ဝငျဘူးသှားပွီ ဆိုရငျ နောကျတကွိမျ ဝငျတဲ့ အခါ ခလယျက ကွား period စောငျ့စရာ မလိုတော့ဘူး ပေါ့နျော။
အခု တျောတျောမြားမြား ဖွဈနတေဲ့ ဟာက ခလယျ၊ ဒီနောကျစဈသညျ ထှကျမလာခငျ ကွား period မှာ လူတှကေ မခံနိုငျတာလညျး ဖွဈနိုငျတယျ။ တကယျလညျး စဈကူလညျး ရောကျလာရော လူက တကယျ တိကတြဲ့ pathogen လိုပဲ သူက တိုကျရိုကျ တားဂကျလုပျ ပေးတာမြိုး မဟုတျတော့ ပဲနဲ့ တကိုယျလုံး ပွာသှားတာမြိုး ဖွဈတာပေါ့နျော။ အခု ကာကှယျဆေး ထုတျတယျ ဆိုတာ သူတို့က ကိုဗဈ ကိုပဲတဲ့တဲ့ သှားပွီး တားဂကျ လုပျမယျ။ ပွီးတော့ ခွဖေကျြ ပေးမယျ။ အဲဒီဟာကို သူတို့က လုပျတာပါ။”
မေး။ ဒီလိုပုံစံနဲ့ ဆေးထုတျဖို့ လုပျမယျ ဆိုရငျ အဆငျ့ ဘယျနှဈဆငျ့ ရှိပါလဲ။
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။ ။ “စုစုပေါငျးဆိုရငျတော့ အဆငျ့က ၅ ဆငျ့ ပေါ့။ ပထမဆုံး ဆိုရငျ သူက pre clinical ဆိုတဲ့ဟာ ရှိတယျ။ ဒါကတော့ ဓါတျခှဲခနျးထဲမှာ lab ထဲမှာ လုပျတဲ့ဟာ။ ဒီဗိုငျးရပျ ဒါမှမဟုတျ ဒီ ဘကျတီးရီးယား ကို ခွဖေကျြမယျ ဆိုရငျ ဒီဟာကို ဘယျလိုမြိုး ခွဖေကျြမလဲ။ ဘယျလို mechanism လဲ ဆိုတာရှိတယျ။ field တခုရဲ့ အလုပျလုပျပုံ။ အခု ဒီထှကျလာတဲ့ ကာကှယျဆေး vaccine ဆိုရငျလညျး ဒီကောငျကို target လုပျမယျ ပဈမှတျထားကွညျ့မယျဆိုရငျ တှသှေ့ားတဲ့. Antigen ကို သူတို့က ဒီခန်ဓာကိုယျထဲ ကိုဘယျလို introduce လုပျမလဲ။ DNA အနနေဲ့ introduce လုပျတာရှိတယျ။ RNA အနနေဲ့ introduce လုပျတာရှိတယျ။ အခု ဒီ ထုတျမယျ့ Moderna တို့ Pfizer တို့ဆိုရငျ M- RNA ကို သုံးပွုပွီးတော့ ထုတျမယျ့ ကာကှယျဆေးပေါ့နျော။. ဒါ ကို ဘယျလိုမြိုး နညျးပညာနဲ့ ထုတျမှာလဲ ဆိုတာ အလုပျလုပျတဲ့ ပုံစံကို သူတို့ ရှာရတယျ။
ဒီအလုပျလုပျပုံ လုပျနညျး ပုံစံက ဖွဈနိုငျတယျ။ သေ ခြာတယျ။ အန်တရာယျလညျး ကငျးတယျဆိုလိုရှိရငျ နောကျ အဆငျ့တခု အဲဒါကရြငျ သူက phase 1 . အဲဒီ phase 1 မှာ ကရြငျ လူမှာ ဆိုလိုရှငျကော တကယျတမျး တှတေဲ့ အခါ ကရြငျ အဆငျပွမေလား ဆိုတဲ့ဟာကို သူတို့က စမျးရတယျ။ ဒါက လူ့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျ အလေးခြိနျပျေါမှာ မူတညျပွီးတော့လညျး dose ဘယျလောကျ ပေးမလဲလိုမြိုး အဲဒါတှေ ကရြငျ သူက phase 1 – phase2မှာ ဆုံးဖွတျရတယျ။ အဲဒါ ဆုံးဖွတျပွီးရငျ phase3ကို ရောကျသှားတယျ။ အခုဒီ တျောတျောမြားမြား လုပျနတေဲ့ ဟာတှေ ဆိုလို့ရှိရငျ phase2နဲ့3ကို ပေါငျးပွီး လုပျတာပဲ ဖွဈစေ။ phase 1 နဲ့ phase2ကို ပေါငျးပွီး လုပျတာပဲ ဖွဈစေ။ အခြိနျမွနျအောငျ သူတို့ ပေါငျးပွီး လုပျနတောတှေ ရှိတယျ။
phase 1 မှာ ၁၅ ယောကျကနေ အယောကျ ၃၀ ဆိုရငျ phase2မှာ သူက ရာဂဏနျး။ phase3မှာ တော့ ထောငျဂဏနျး အနဲဆုံး လုပျကွတယျ။
phase3မှာကရြငျ ဒီကာကှယျဆေးက ဘယျလောကျအထိ အကြိုး သကျရောကျမှု ရှိသလဲ။ ဥပမာ - အကြိုးသကျရောကျမှုက ၂ လပဲ ရှိမလား။ ဒါဆို ၂ လပွီးရငျ နောကျတကွိမျ ထပျထိုးရမလား။ ဒီ ၂ လ နောကျတကွိမျ ထပျထိုးပွီး သှားရငျကော နောကျဘယျ ဘယျလောကျ ကွာကွာ အထိ ဒီအကြိုး သကျရောကျမှု ရှိသလဲ။ နောကျ ရောဂါ အခံ ရှိတဲ့ လူတှဆေိုရငျကော၊ ဒီတခွား ဆေးတှနေဲ့ cross reaction ရှိသလား ။ ဒါတှကေို phase3မှာ သသေခြောခြာ စမျးသပျရတယျ ပေါ့နျော။
မေး။. ။“ phase3စမျးသပျပွီးရငျတော့ တျောတျောလေးကို အဆငျပွတေဲ့ အဆငျ့ ရောကျနပွေီပေါ့။
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။. ။“ဟုတျကဲ့။ Phase3ကို စမျးသပျပွီး တော့ အောငျမွငျတယျ ဆိုရငျ ဒီဆေးသညျ အကြိုးသကျရောကျမှုလညျး ရှိတယျ။ အန်တရာယျလညျး ကငျးတယျဆိုတာကို ပွောပါတယျ။ phase4ဆိုတဲ့ဟာက ကွညောထားခွငျး မဟုတျပဲနဲ့ လုပျတဲ့ study လလေ့ာမှုပေါ့။ FDA က phase3ပွီးရငျ Approval ပေးလိုကျပွီ။ phase4မှာကတြော့ တကမ်ဘာလုံးကို ဖွနျ့လိုကျပွီးသား ဖွဈတဲ့ အတှကျ သူ့ရဲ့ long term effect ရရှေညျ အကြိုး သကျရောကျမှုပေါ့။ ဒီဆေးကို ထိုးလိုကျပွီးလို့ တနှဈကွာရငျ ဘာဖွဈမလဲ။ ၂ နှဈကွာရငျ ဘာဖွဈမလဲ။ သူ့ဟာသူ ဆကျပွီးတော့ ရရှေညျ လုပျသှားတဲ့ ဟာကို ပွောတာပါရှငျ့။”
မခငျဇာဝငျးပွညျ့ရဲ့ ပွောကွားခကျြနဲ့ပ ဒီသီတငျပတျအတှကျ သိပ်ပံနဲ့နညျးပညာ. ကဏ်ဍကို ဒီမှာပဲ ရပျနားလိုကျပါရစေ။